အချစ်စစ်ဆိုတာ တစ်ယောက်ထပ်ပိုမရှိနိုင်ဘူးတဲ့။ ဟုတ်ပါ့မလား ? ဒီစကားကိုလက်ခံတဲ့သူရှိသလို သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့သူတွေလည်း ရှိမှာပဲနော်။ တစ်ခုရှိတာကတော့ ပျိုပျိုမေတို့ထက် ကိုကိုတို့မှာက အချစ်က တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကိုထက် ပိုပြီးရှိနေနိုင်တာတဲ့။ ဒါဆို အဲ့လိုတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးချစ်နိုင်နေတယ်ဆိုတာ သစ္စာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောလား ? ဒါလည်းစဉ်းစားစရာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း လူတစ်ယောက်က အချစ်ဆိုတာကို တစ်ယောက်တည်းပေါ်မှာပဲ တသမတ်တည်းပုံသေရှိနေမယ်ဆိုတာတော့ တော်တော်ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲကိစ္စမျိုးပါ။ အဓိကကတော့ အချစ်ဆိုတာအပေါ်မှာ ဘယ်လိုခံယူချက်နဲ့အဲ့ဒီ့လူက လက်ခံထားလဲဆိုတာပါပဲ။
ဒီတစ်ယောက်ကိုက ရယူခြင်းနဲ့ချစ်မိတာ၊ ဟိုတစ်ယောက်ကိုက ပေးဆပ်ခြင်းနဲ့ချစ်မိတာ ဆိုတာမျိုးကရော ? ကိုယ်က ကိုယ်နဲ့တွဲတဲ့ချစ်သူတိုင်းကို ပျော်စရာတွေဖန်တီးပေးပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေနေနိုင်တာဆိုရင်ရော ? အဲ့လို စဉ်းစားရကြပ်စရာ၊ နားလည်ရခက်စရာ အခြေအနေမျိုးတွေကြုံလာပြန်တော့လည်း တစ်ယောက်ထပ်ပိုပြီးချစ်နေတာကိုပဲ အပြစ်လို့မဆိုဘဲ လက်သင့်ခံရတော့မလိုလို။
အဓိကကတော့ တစ်ဘဝလုံးမှာ အချစ်စစ်တစ်ခုပဲရှိရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ နောက်တစ်ယောက်ဆိုတာတော့ ပေါ်မလာသင့်ဘူး။ တွဲဖို့မဆုံးဖြတ်သင့်ဘူးပေါ့နော်။ နှစ်ယောက်တစ်ပြိုင်နက်တွဲတာထက်စာရင် ကိုယ်အရင်တွဲမိတဲ့တစ်ယောက်ကိုလည်း လမ်းခွဲဖို့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ နောက်ပေါ်လာတဲ့အချစ်ဆိုတာကို ဒုတိယနေရာမှာပဲ တိတ်တိတ်လေးခံစားဖို့သပ်သပ်ထားလိုက်တာက အကောင်းဆုံးပါ။
Souce : Cosmo